I-Metal Tin Ingenza Umkhiqizi Wezokuthengisa kanye Nezitolo Ezivela EChina
Sinikeza Metal Tin Can Packaging Ibhokisi Likahle
Metal Tin Can Umkhiqizi we-Packaging-YiCheng Industrial
I-Metal tin iyakwazi ukukhiqiza i-Packaging-YiCheng IndustrialYiCheng Industrial (Shenzhen) LTD Shenzhen Ihhovisi lasungulwa ngonyaka ka-2013, i-tin can box yethu eyakhiwe ngo-2006 yasungulwa ngonyaka we-XNUMX, igama leFektri: DongGuan FengGang TengWei Hardware Products Co, Ltd.Our fektri inobuchwepheshe obuphambili futhi ikhiqiza usayizi ohlukile nobukhulu bemikhiqizo ye-tin.
Ikhiqiza ikakhulukazi ibhokisi le-candy tin, ibhokisi le-tin tin, ibhokisi le-tin yokudla, ibhokisi lezimonyo, njll. Futhi inganikeza amakhasimende yonke insizakalo esetshenziselwa ukufaka umdwebo we-3D, ukubumba, ukupakisha, nokusebenza. Sinezisebenzi ezingama-40 zokuphatha nezobuchwepheshe, futhi abasebenzi abangaphezu kwama-300, singakwazi ukufeza izidingo ezihlukile kumakhasimende.
The i-tin esezingeni eliphakeme ingakha imikhiqizo sikwazi ukusakha ubudlelwano besikhathi eside namabhizinisi adume umhlaba wonke ezimbanjeni ezifana neLipton, Walmart, Disney, Cocacola, njll. Uhlobo lwebhizinisi: Amabhokisi e-tin kanye nazo zonke izinhlobo zemikhiqizo ye-tinplate.
Ufuna ukuthola abakhiqizi be-Metal Tin Can for Packaging e-China?
I-YiCheng Industrial izoba ngumkhiqizi wakho omuhle kakhulu wesitsha se-tin China
Sisho ukuthini lapho sisho lokho?
Njengenye yezinkampani ezihamba phambili zensimbi yamabhokisi e-China, i-Yicheng inikezelwe ukuhlinzeka amakhasimende ethu kuyo yonke imboni ngensizakalo evelele kanye namanani wokuncintisana kumaphakheji ethu aphezulu kanye nabaphakeli be-tin box pack. Lonke ithimba laseYicheng lizibophezele ukukunikeza izindlela zokwandisa imali oyitholayo Izindleko Zokunciphisa Ezisebenzayo, Ukuthengisa Okungeziwe Kokukhiqizwayo Okuthuthukisiwe.
Uneminyaka engaphezu kwengu-15 yesipiliyoni, u-Yicheng unolwazi lokusingatha izingqinamba eziyinkimbinkimbi kakhulu zokupakisha. Siyazi futhi siyaqonda izinhlelo zakho, akunandaba ukuthi uvela kumkhakha muphi. Sithembele ekuhlinzekeni imikhiqizo, izinsizakalo kanye nolwazi lwezobuchwepheshe oluzokujabulisa futhi lusisize sakhe ubuhlobo obuqinile nawe, sisize ibhizinisi lakho ukuba likhule futhi likhule.
Inkampani yebhokisi lensimbi ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-10,000 futhi inemigqa yomkhiqizo eyi-10, Umqondo wethu wokuphatha uthi "Ukuphepha, ukusebenza kahle okuphezulu, ikhwalithi ephezulu, izindleko eziphansi", okuyinkampani yebhokisi le-tin elisethe uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, ukusebenzisa ikhwalithi ephelele inqubomgomo yokuphatha kanye nesilinganiso sokuhlola esijwayelekile njengenqubo yokuhlola, nokubamba iZero Defect njengenhloso yekhwalithi.
I-tin can company ngokuya nge-ISO9001: 2000 futhi yathatha njengezinga lokuhlolwa kwekhwalithi, ukwenza ikhwalithi yomkhiqizo iphelele. Yonke imikhiqizo yethu ifinyelele ku-Food Safety Grade enezitifiketi ze-SGS / ROHS / FDA / BPA, iba imboni ye-tin box ehamba phambili eChina umgomo esibe siwufuna njalo.
Ukuba yitini lensimbi enkulu ye-OEM kungenza umakhi, sinesipiliyoni esihle ekwakheni umbono wokudala kusuka kumakhasimende. Ngokuxhumana okuhambisanayo phakathi komunye nomunye, ungaqonda ngokuphelele zonke izinqubo kusuka ekusetshenzisweni kwamasethingi kuze kube sekupheleni komkhiqizo.
Umthamo wansuku zonke: 8,000pcs kuya ku-12,000pcs kwebhokisi le-tin elijwayelekile. 4,000pcs kuya ku-6,000pcs kwebhokisi lekhethelo lokwakha elikhethekile. I-130,000pcs approx.tin ibhokisi lomshini oluzenzakalelayo
Umkhakha Webhokisi Lensimbi Yethu
Indawo -Factory: 20,000 metres.
-Indawo eyingqayizivele yesakhiwo sefektri: amamitha skwele ayi-10,000 (ukwakhiwa okungu-4)
Imigqa yokukhiqiza: imigqa yokukhiqiza engama-30strip kanye nezintambo ezingama-50 ezizenzakalelayo zokukhiqiza zizonke.
-Imishini enguTotal engu-200 ifakiwe: imishini engu-60 yamandla wokugaya amathani angama-45.
- Imishini engu -20 yemishini yokujikijela amathani angama-65 yamandla angama-20 wamandla okubhoboza amathani.
Ithimba elinolwazi kakhulu lifake isicelo ku-R & D: Ilungele njalo ukunikeza amakhasimende ngezinsizakalo ezihlanganisiwe, kufaka phakathi izinto ezintsha zomkhiqizo kanye ne-OEM / ODM.
Sineqembu elihle kakhulu lokwenza umsebenzi ukuhlinzeka ngokulethwa kwesikhathi ndawonye ngentengo yokuncintisana
Noma yimaphi amaphrojekthi amasha wokufakwa kwamathini, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Silangazelela ithuba lokusebenzisana.
Senza ikhwalithi ephezulu ye-tin box yeKhasimende laseYurophu nelaseJapan. Ipuleti lethu le-tin livela eNetherlands, enobuchwepheshe obuphakeme bokuphrinta endlini.
Sithe Amakhasimende Athu
"Inqubo yokucaphuna esheshayo, amasampula wekhwalithi uma uceliwe futhi uhanjiswa lapho kuthenjiswa"
"U-Yicheng uyaqhubeka nokusisiza sikhombe izindawo ezinamathuba emakethe futhi siwine ama-akhawunti abalulekile ngokuxhaswa kwesiteshi ngensizakalo enhle kakhulu nekhwalithi yomkhiqizo"
“Ngisebenzisana nabaphakeli abaningi, uYicheng ungomunye wabambalwa engingahlala ngincike ekutholeni impendulo ngesikhathi esifanele. [Yicheng] uhlala esebenza ukungigcina ngazisiwe ngesimo se-oda futhi iqembu lenza umsebenzi omuhle ngokweqa izidingo zethu ”